Inqubomgomo ye-Google AdWords - Landela leyo Mithetho!
Ngabe izikhangiso zakho zombhalo zivunyelwe ukwephulwa kokuhlela noma uphawu lwentengiso? Uma wenze konke kahle, kungani ukhwazwa yiGoogle?
I-AdWords ayikwazisi ngokushesha, izikhangiso eziningi kakhulu zombhalo ezingabuyekezwa ngasikhathi sinye. Banama-algorithms abo azothola isikhangiso sakho sombhalo uma wephule inqubomgomo yabo. Ukutholwa kuhlala ngemuva kweqiniso futhi kungenalwazi oluningi lokuthi kungani. Kuyakhathaza kakhulu!
Vele uthola i-imeyili enobungani evela ku-LPQ-Support@Google.com enolayini wesihloko; I-akhawunti yakho yezikhangiso ze-Google inokuhlukumeza okuningi! Ungayinaki le imeyili, ngoba i-AdWords izokhubaza i-akhawunti yakho uma ukwephula umthetho kuqhubeka. Indlela enhle yokugwema lobu buhlungu benhliziyo, nesikhathi sokuphumula se-akhawunti, ukuqonda kahle Inqubomgomo Yezikhangiso zeGoogle.
At EverEffect, sinenhlanhla yokuba ne-Googler yethu yakudala njengomthombo we-superstar lapho sidinga ukubhekana nenqubomgomo ye-AdWords. Ngezansi kukhona amanye amathiphu okufanele abe phezulu kwengqondo kubo bonke ochwepheshe be-PPC.
Inqubomgomo Yokushintsha Inqubomgomo
I-AdWords inamanani amaningi wezinqubomgomo zomhlaba wonke kanye nezwe elithile ezilawula lonke uhlobo lokukhangisa olunikezwayo. Ngeza kulokho iqiniso lokuthi inqubomgomo iyashintsha kaningi ukuze ihambisane nesivinini semboni. Ezweni lethu lesimanje labadala, bekungeke yini kube kuhle uma ungafaka uhlelo lokuxwayisa esipheqululini sakho oluzokugcina waziswe ngezinguquko zenqubomgomo yokukhangisa njengoba zenzeka? Qagela ukuthi yini: IGoogle inokuthile okucishe kuphole. Ibizwa nge- Inqubomgomo Yokushintsha Inqubomgomo, futhi uma ungakajwayelani nayo ngincoma kakhulu ukufaka ibhukumaka.
Yikhasi elibala izinguquko zenqubomgomo yokukhangisa njengoba zenzeka, noma ngaphambi nje kokuqaliswa kwazo. Ngokwenza kube umkhuba ukubheka lokhu ngezikhathi ezithile, ungahlala phambili kwejika futhi uvimbele izikhangiso ukuthi zehle ngenxa yezinguquko ezingalindelekile kunqubomgomo ye-AdWords.
Izinkinga ze-Factor Policy ku-PPC Game Plan yakho
Okusemqoka ukuthi ufunde ukuthi ungazixazulula kanjani ngempumelelo izingqinamba zenqubomgomo, uzixazulule ngokushesha okukhulu, futhi uhlele i-akhawunti yakho ukuze uvimbele izikhangiso ukuthi zingehli ngokuzayo.
Uma wenza noma yikuphi ukuthuthukiswa kwe-akhawunti ye-PPC, akufanele ukhiphe zonke izikhangiso zakho bese uzifaka ezintsha ngaphandle kokuthi ulungele ukuthola konke ngaphandle kokuthunyelwa isikhashana.
Ukuqonda lokhu, kanye neqiniso lokuthi izikhangiso eziningi kuzodingeka ukuthi zibuyekezwe ngaphambi kokuba zivumeleke ukuthi zisebenze, kufanele ulindele ukuthi kungaba nesikhathi esinqabile (kungaba ngenxa yokubuyekeza noma ukungavumi izikhangiso) ngaphambi kokuthi izikhangiso zakho ezintsha ziqale ukusebenza kukho konke okusemandleni abo. Ngakho-ke, uma ungafuni ukumisa konke ukukhangisa kwakho, into enhle ongayenza ukukwenza qhubeka nezikhangiso zakho zamanje ezimbalwa ngenkathi wenza ukulungiswa kwe-akhawunti yakho.
Ilula kangako, kepha kuyamangaza ukuthi injabulo yokulungiswa kwesikhangiso ingadala kanjani ama-hiccups lapho umphathi ophethe i-akhawunti ye-PPC 'entwasahlobo ehlanza' konke kusenesikhathi.
E-US, into yokuqala okufanele uyiqaphele ngenqubomgomo ye-AdWords Trademark Policy ukuthi yona ilawula kuphela umbhalo wesikhangiso, futhi ayithinti amagama angukhiye. Njengoba basho kaningi, iGoogle ifisa ukuvumela abakhangisi inkululeko eningi ngangokunokwenzeka ekukhetheni amagama abo angukhiye, futhi ngenxa yalokho e-US abayiqapheli imigomo ephawulwe ngamagama angukhiye. Lokhu kusho ukuthi uma ungumnikazi wophawu lwentengiso futhi ucasulwa ukuthi isikhangiso somncintiswano siyavela lapho igama lakho lokuhweba lifakwa kubha yokusesha yakwa-Google - uxolo, uphelelwe yinhlanhla.
Umbuzo olandelayo ozowuphendula ngukuthi iGoogle ibheka kanjani izimpawu zokuhweba embhalweni wesikhangiso. Uma ungabhalisanga igama lakho lokuhweba ne-Google futhi wacela ukuthi baliqaphele, uphawu lwakho lokuhweba ngeke lubhekwe. Isikhathi! Ngenxa yalokhu engicabanga ukuthi kungumkhawulo wezinsizakusebenza, i-Google ayicwaningi ngokuqinile imigomo enophawu lokuhweba ukuze igcinwe kufayela lokuqapha, ngakho-ke kufanele uthumele isikhalazo se-TM ukuze uqale inqubo yokuqapha.
Ukuphela kwento esele manje ukwenza isiqiniseko sokuthi uyayishayela i-AdWord Policy yakho maqondana neMboni Yezemithi. Le yinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi ifanelwa okuthunyelwe kwayo… hlala ubukele!
Tags: i-google adwordsinqubomgomo ye-google adwordsLinganisa i-CP
UBig Brother ngumngani wakho on Facebook
Jul 18, 2011 ngo-2: 14 PM
Ngisanda kugijimela le ndatshana namhlanje ekuseni. Ngingathanda ukwabelana ngolwazi lwami kusukela ngesonto eledlule ne-Google, ngizwe ukuthi ngabe kukhona yini okwehlele okufanayo kubo…
Ngimusha kulo msebenzi, ngisebenze isikhathi esigcwele manje amasonto ama-2 (isikhathi esithile izinyanga ezimbili ngaphambi kwalokho). Ngithole isimo "somuntu ofanelekayo" kusuka ku-Google evikini eledlule.
Ngesonto eledlule ngemuva kokudansa nginqamula izinqubomgomo zabo zokuhweba ngesikhathi ebengisebenza lapha, ngifinyelele eqophelweni eliphezulu. Ngibe nezikhangiso ezintsha eziningana ezinqatshiwe ebezihluke kakhulu ekusebenziseni kwabo amagama ophawu lokuhweba kunezinye izikhangiso ebezivele zivunyiwe. Ngithumele i-imeyili, ngicela ukucaciselwa ukuthi kungani lezi zikhangiso zingavunyelwanga ngenkathi ezinye zilungile.
Njengoba ubeke amazwana ngamagama asemqoka, ukuqonda kwami ​​ukuthi amagama angukhiye ayinkinga ehlukile embhalweni wesikhangiso. Kepha ngenkathi ngithola impendulo evela ku-Google mayelana nombuzo wami, nakhu abakusho kimi ngamanye amagama angukhiye ebenginawo kula maqembu ezikhangiso:
"Amanye amagama angukhiye ivolumu yokusesha ephansi futhi lokhu kungathinta isinqumo sokugcina kuzikhangiso zakho, ngakho-ke, ngiphakamisa ukuthi ususe la magama angukhiye ohlwini lwakho lwamagama angukhiye."
Ngenkathi ngibhala futhi ngicela ukucaciselwa ngalesi sihloko futhi ngicela bangikhombe kokuqukethwe engingakufunda ukusiza ukugwema inkinga ngokuzayo, abanikanga lusizo. Ngitshelwe kabili ukuthi ngisuse amagama angukhiye wevolumu yokusesha ephansi futhi ngisebenzise amagama angukhiye amiswe okwesikhashana njengoba lokhu kwesinye isikhathi kuzoba nomthelela ekwamukelweni kwesikhangiso. Kungani?
Ngo-Apr 18, i-2012 ku-1: i-34 PM
I-akhawunti yami ye-Google Adwords ibingasebenzi isikhathi esingangonyaka. Kepha ekugcineni ngafaka imali eyi- $ 10 ku-akhawunti yami ye-adwords, ngakha isikhangiso sewebhusayithi yami entsha. Futhi ngakusasa iGoogle yamisa i-akhawunti yami. Ngibathumele i-imeyili futhi ngabuza ukuthi kungani beyimisile, bangibhalela futhi bathi abakwazi ukuyiyeka futhi banginika isizathu sokuthi kungani. Ngifunde inqubomgomo yabo yokukhangisa njll., Futhi angiboni lutho olubi ngesikhangiso sami noma iwebhusayithi. Isikhangiso sixhumanisa ngqo nekhasi lami lokuthengisa, futhi ngithengisa imikhiqizo eqotho engibize ama-doller ayizinkulungwane ezimbalwa ukuthi ngidalwe ngabahleli. Mhlawumbe i-Google Adwords ayisabavumeli abantu ukuthi baxhumane nekhasi lokuthengisa? Angikwazi ukuthola lokhu. Ngafaka intengo yomkhiqizo wami esikhangisweni ngakho-ke abantu abakwaziyo ukuwuthenga kuphela abangachofoza isixhumanisi. Ingabe inani elisesikhangiso lenze ukuthi i-akhawunti yami imiswe okwesikhashana? Lokhu kuyadida ukuzama ukukuthola. Kungenzeka ngikhansele i-akhawunti, ngilahlekelwe yi- $ 10, bese ngiqala kabusha nge-akhawunti entsha. Kepha ngokwemigomo ethi uma i-akhawunti imisiwe noma yimaphi amanye ama-akhawunti amasha engiwakhayo azomiswa kuze kube phakade, futhi ngeke ngisakwazi ukukhangisa ngawo. Kuyadida lokhu.
Mar 27, 2014 ku-10: 20 AM
Unembile ngo-100% mayelana nokusebenzisa ikhophi yesikhangiso esihlosiwe kanye nesakhiwo samagama asemqoka - sineklayenti ebhizinisini lamathayi / lezinsizakalo zezimoto futhi ikakhulu limayelana nomsila omude kubo onobubanzi obukhethekile nobubanzi bamasondo abenza kahle ngokuhlangene. Uma ungathanda ukuthi ngibheke i-akhawunti yakho bese ngicabanga ngeziphakamiso ezithile nge-imeyili kimi simon.b@resultsdriven.org. noma singasetha ucingo olusheshayo uma ukhetha ifoni 302-401-4478.